बाबुरामका गुरुचेलाको भेटघाट (फोटो फिचर) | OnlineChautari.com
बाबुरामका गुरुचेलाको भेटघाट (फोटो फिचर)
October 14, 2015 | 2:29 pm
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना गुरु हवार्ड वर्कलेसँग बुधबार बिहान आफ्नै निवासमा भेटघाट गरेका छन् । छोरा जोन वर्कले र बुहारी जनी सहित भट्टराई निवास पुगेका फादर हवार्ड वर्कलेलाई आफ्नो निवासमा स्वागत गर्न पाउदा डा. भट्टराई भावुक देखिन्थे । उनी स्वागत गर्न ढोका सम्म पुगे । डोर्याएर आशनमा बसाले र नजिकैको एउटा कुर्ची आफैले उठाएर आफ्ना बालसखा तथा गुरुका छोरा जोनलाई आसनग्रहण गराए । स्वास्थ्य स्थीति बाट कुराकानी शुरु भयो ।
डा. भट्टराईले गुरु हवार्डलाई सोधे कतिबर्ष हुनुभयो ? उनका छोरा जोनले नै जवाफ दिए एक हप्ता भित्रै नब्बे बर्ष पार गर्नुहुन्छ । त्यसो त नेपाली तथा नेपालमा रहेका फादर वर्कलेका मित्रहरुले मंगलबार साँझ नै उनको जन्म दिवश मनाएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराईले भनेः ‘थाहा पाएको भए म पनि आउने थिए ।’ डा. भट्टराई १९७० मा एसएलसी बोर्ड प्रथम हुँदा बोर्ड दशौं भएका जाजरकोटका डा. के. बी. रोकायाले बुधबार बिहानको भेटघाट तय गरेका थिए । त्यतिबेला उपेन्द्र देवकोटा, धनराज अर्याल र कालीबहादुर रोकाया तीनजना बोर्ड दशौं भएका थिए ।
एकपटक भट्टराईको बैठक कक्षमा सन्नाटा छायो । फादर वर्कलेले सन्नाटा तोडेः ‘तिमी मेरो प्रीय बिद्यार्थी कहिल्यै दोश्रो भएनौं म तिमिप्रति गर्व गर्दछु ।’ अहिले चाँहि के गर्दै छौं ? भट्टराईले ज्ञानी चेला झैं उत्तर दिए, ‘तपाईको आर्शिबादले राम्रो गरिरहेकै छु । जनताको सेवामा छु । गोर्खाका दुई क्षेत्रबाट फरक फरक समयमा चुनाव जिते । भर्खर नयाँ संबिधान बनायौं । अव नेपाल नयाँ युगमा प्रबेश गर्यो ।’ फादर वर्कलेले आफ्नो छोरातर्फ देखाउदै भने उसले तिम्रो बारेमा बेलाबेला जानकारी दिईरहन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले अब आफुले राजीनामा दिईसकेको बताएपछि फादर झुक्किए र भनेः ‘के प्रधानमन्त्री बाटै राजीनामा दियौं ?’ डा.
भट्टराईले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको र फेरी गोरखाबाट सभासद्मा चुनिएर आएको बेलिबिस्तार लगाए ।
फादर वर्कले सन् १९६० मा काठमाडौको दाहिने किनारा हुँदै हिडेरै गोरखाको आफपिपल र लुईटेल पुगेका थिए । उनले हिडेरै त्यहाँ पुगेको र बिद्यालय खोलेको स्मरण गरे । डा. भट्टराईले भनेः ‘गोरखाको ईतिहासमा आधुनिक शिक्षाको जग बसाल्न तपाईको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अहिले एउटा गाउँमा एक सयको हाराहारीमा ईन्जिनियरहरु छन् ।’ कुराकानी भईरहदा फादर वर्कलेका छोराले लुईटेल स्कुलको ईतिहास स्मरण गर्न आफ्ना पितालाई अनुरोध गरे । त्यसको भिडियो रेकर्ड राख्न थाले । भारतको रक्सौलमा जन्मेका जोन स्पष्ट नेपाली बोल्छन् र स्मरण गर्दछन् । बाबुराम तपाई र म ६१ बर्ष पुग्यौं । हामी लुईटेलमा सानोमा सँगै खेल्थ्यौं । डा. भट्टराईले आँपको रुखमुनी बसेको भज्याङ र चौतारीमा डुलेको स्मरण गरे ।
अहिले भूकम्पबाट लुईटेल स्कुल भत्किसकेको छ । फादर वर्कले एक हप्ता अगाडि नेपाल आएर लुईटेल र आँपपिपल पुगे । उनले लुईटेल स्कुलको भत्किएको फोटो पनि बाबुराम भट्टराईलाई दिए । र भने अव यो बनाउने जिम्मा तिम्रो हो । भाबुक बाबुरामले उक्त स्कुल लगायत नेपालका भत्किएका धेरै घर तथा भवनहरु बनाउनुपर्ने भएको जानकारी दिए । फादर वर्कलेकीे श्रीमती हाल बिरामी भएकोले नेपाल आउन नसकेको जानकारी छोरा जोनले डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिए । आमाको मन राम्रो छ तर शरिर बिरामी , तपाईलाई संझिरहेकी छिन् । छोरा जोनले भूकम्पबाट लूईटेल स्कुल भत्के पनि उनीहरु सानो हुँदा पानी खाने गरेको धारो भने यथावत रहेको स्मरण सुनाए । जोनले उक्त धारोको मुहानमाथि भंज्याङसम्म रहेको बताए ।
यसपटक लुईटेल र आँपपीपल दुबै स्कुल पुगेका वर्कले बाबुछोराले स्कुलका बिहानी प्राथना सभामा नेपाली भाषामा बोलेका थिए । कुराकानी चल्दै गर्दा कृष्णप्रसादको घर , भिमप्रसाद गुरुको प्रसंङ्ग र थोमस बर्गीस तथा वर्गीस थोमस गुरुका स्मरण गरे । डा हेलेन हिस्टनको स्मरण पनि भट्टराईले गरे । मैले देखेको पहिलो डाक्टर हेलेन हिस्टन हुन् । मलाई ग्यास्ट्रीक भईरहदा उनले औषधि दिन्थीन् , डा. भट्टराईले स्मरण गरे । क्यानाडाका हर्मन सिम्रोजले गोरखामा कृषिको आधुनीकिकरण गरेको प्रसंङ्ग पनि भेटघाटमा चलेको थियो । सिम्रोजको योगदानबाट गोरखामा आधुनीक कृषिको शुरुवात भएको पनि डा. भट्टराईले बताए ।
गुरु चेला छलफल चलिरहदा भट्टराई श्रीमती हिसिला र छोरी मानुषी पनि आईपुगे । भट्टराई पत्नी हिसिलाले भनिन् मैले ससुरा बा भन्नु पर्ला है ? फादर वर्कलेले भट्टराई पुत्रि मनुषीलाई सोधे तीमी स्कुल जादै छौं । मानुषीले जवाफ दिईन् म पढ्दै छु । अव पीएचडीका लागि एमफिल सक्दैछु । जोनले बिचैमा भने मेरा छोरा छोरीलाई पनि मैले नेपाली सिकाएको छु । उनीहरु नेपाली बोल्छन् ।
फादर वर्कलेले लुईटेल बस्दा घरमा उडुसले सताएको , पार्टी पौवामा डुलेको स्मरण गरे । फादर वर्कलेले गोरखा नै किन रोजे होलान् ? डा. के.वी. रोकायाको प्रश्नको जवाफ दिदै वर्कलेले भनेः त्यो तत्कालिन सरकारको निर्णय थियो । भट्टराईले स्मरण गर्दै भनेः ‘म गोरखाको पीछडिएको क्षेत्रको बिद्यार्थी त्यो स्कुल खुल्नु र पढ्न पाउनु संयोग थियो । त्यहाँ पढ्न नपाएको भए के हुन्थ्यो होला ?’ फादर वर्कलेले उपयुक्त समयमा अष्ट्रेलिया आउन निम्तो दिए । २०१३ मा रेडियो जनादेशको उद्घाटनमा अष्ट्रेलिया जाँदा समय अभावले उनले आफ्ना गुरुलाई भेट्न पाएका थिएनन् । भट्टराई सिड्नीबाटै फर्किनु परेको थियो । गुरु त्याँहाबाट एक हजार किलोमिटर टाढा मेलवर्नमा बस्थे ।
अमेरिका जादा चाँहि उनले न्युयोर्कबाट चार घण्टा टाढा गएर उनलाई निकै माया गर्ने गुरुआमा एलेनोरलाई भेटेका थिए । संयोगवस सोहि भेटघाटमा उनका अर्का गुरु थोमस वर्गिससँग पनि उनको पूर्नमिलन भएको थियो । डा. भट्टराईले अर्को पटक आफु भट्न आउने बताए । बिदाईमा फादर वर्कलेले डा. भट्टराईलाई अष्ट्रेलियन क्यालेन्डर दिए । फादर वर्कले तथा उनका छोरा जोन र बुहारी जोनी पनि बुधबार मध्यान्ह अष्ट्रेलिया तर्फ फर्के ।